Christian Olsson: "rajadii faraha ayay ka baxday" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Christian berättade öppet och proffsigt om varför han inte kan fortsätta elitkarriären. Foto: Peter Stenberg/Sveriges Radio
Christian Olsson: "rajadii faraha ayay ka baxday"
La daabacay måndag 14 maj 2012 kl 19.17
Wuxuu ahaa go'aan aad iigu adag inaan gaaro, sidaa waxaa sheegay Christian Olsson, cayaar-yahan caan ku ah ciyaaraha fudud una dhashay dalkan swiidhen.
- In aan ka qeeyb galo tartanka olombikada ee lagu qaban doono magaalada London. Inaanan bilad ku guuleeysan, hase yeeshee aan un ka qayb qaato tartanka biladda, sidaa ayuu Christian Olsson ku macneeyay rajada uu qabay ee iminka ku khasbanaaday inuu ka tanaasulo.
Sida uu ku sheegay kulan-saxaafadeed Christian Olsson isaga oo ku sugan xarunta San Diego ee cayaaryahannada Iswiidhen ey ku sugan yihiin. Olsson ayaa sheegay inuu ogaaday isla-markaana aqbalay in aaney cagtiisi tartanka ka qayb qaadan karin. Hase yeeshee aannu ahayn go'aan sahlan midka uu gaaray, sida uu sheegay Olsson mar uu u warramayay laanta ciyaaraha ee idaacadda Iswiidhen.
- Waxaan qabaa in cayaartooy walba ee heer sare ka gaaray tartammada caalamiga ah ay ku adag-tahay inuu helo wax uu ku badasho rayrayntii uu ka heli jiray tartammadaa. Halka cayaartooy walbaa ay xaqiiqdii sugeeyso sugeeyso inuu mar un cayaaraha ka fariisto.
Lama oran karo inuu istaagay hammigii cayaaraha ee Christian Olsson
Olsson ayaa iminka ku tala jira inuu kaalinta noloshiisa ciyaaraha ku soo gabagabeeyo halkii uu ka bilaabay ee ahayd boodinta sare, hase yeeshee uu ka qeyb qaadan doono oo keliya tartammada qaran ee dalka gudihiisa un la xiriira.
- Waa aan isku dayi doonaan inaan ku guuleeysto biladda dahabka dalka ee bootinta sare oo aanan marna ku guuleeysan. Billado noocaasiya ee bootinta hoose ee dheer iyo midda saddexda tallaabo ayaan hore ugu guuleeystey. Sidaa daraadeed waxaa dhici karta inaan middaa sare u soo qatimo, aniga oo dahab ku guuleeysta.